“Diblomaasiyadu Kuma Dhisna Tuhun Iyo Shaki Laga Qaado Arrimo Markaas Taagan, Dawladaha Dunidana Caashaq Kama Dhexeeyo Ee Dano Ayaa Ka Dhexeeya” | Berberatoday.com
“Diblomaasiyadu Kuma Dhisna Tuhun Iyo Shaki Laga Qaado Arrimo Markaas Taagan, Dawladaha Dunidana Caashaq Kama Dhexeeyo Ee Dano Ayaa Ka Dhexeeya”
Hargeysa(Berberatoday.com)-Danjire Xuseen Cali Ducaale (Cawil), ayaa ka hadlay isbedelada ka socda mandaqada Geeska Afrika, waxaanu sheegay inaanay isbedelada socda oo ay u muhiimsanyihiin heshiiska Itoobiya iyo Ereteriya aanay wanaag mooyee marna Somaliland u keenayn dhibaato.
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi “Haddii aynu nahay Somaliland waxa meel inoo yaala xukuumad iyo shacaba, in cid allaale ciddii danaheena ku soo xad gudubta, fal celin ku haboon aan ka soo saarno, raysalwasaare cusub ayay itoobiya dooratay waana siyaasi ka soo jeeda qoomiayda Oromada, dawladaha adduunka caashaq kama dhexeeyo ee dano ayaa ka dhexeeya. Raysalwasaarihii Ingiriiska ee Sir Winston Churchill ayaa yidhi xikmad ay dawladaha dunidu ilaa hadda ku dhaqmaan, wuxuu yidhi ‘Ingiriisku malaha cadow joogto ama saaxiib joogto ah laakiin wuxuu leeyahay dano rasmi ah oo joogto ah.”
Waxaan maalmahan warbaahinta ku arkayay arrin umadeena ugudb ku ah oon 27kaas sanadood ee aynu dawlada ahayn ina soo marin oo ah wax ka sheegista saraakiisha qaranka oo beelo loo jajabinayo saraakiisha ciidanka. Waa arrin aad u fool xun inaynu ku kacno inagoo cadow is hayna ciidankeenuna ku suganyahay jiidaha hore ee dagaalka waana ayaan darro qof dhiigiisa u hibeeyay dalkiisa in hoos loogu dhaadhaco haybtiisa waxay kay ka dhigantahay taas marka lagu dhaqaaqo qof tiirkii ugu muhiimsanaa oo ah ciidanka qaranka ee dawladnimo ku taagnayd dube la dhacaya oo kale. Waana arrin ka farxinaysa cadowga ciidankeenana niyad jab ku ridaysa. Soomaaliya waxay dawlad u noqon weyday waa ciidan la’aanta; sarkaal ciidan ayaan ahaan jiray laakiin maan aqoonin beelaha ay ka soo jeedaan saraakiisha aan wada shaqayno. Ciidan qaran marka laga hadlayo wax ka reeban oo xaraan ah saami qaybsiga, marba inta is qorta ciidanka ayaa noqoto saraakiil, saraakiil xigeeno iyo dable.
Waxaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee arrintaas ka hadlaya ka codsanayaa in hadday mucaarad yihiin meel kale ka raadiyaan mucaaradada laakiin aanay ciidanka qaranka ula soo leexan waxaanay noqonaysaa arrin wadaniyada iyo xilkasnimada aad uga durugsan.”